Ciidamada Maraykanka iyo Maleeshiyaad hubaysan oo Suuriya ku dagaalamay. – Radio Daljir
Ciidamada Maraykanka iyo Maleeshiyaad hubaysan oo Suuriya ku dagaalamay.
Febraayo 13, 2020 7:37 b 0
Ciiddamada Dowladda Maraykanka iyo Maleeshiyaad deegaan ah ayaa ku dagaalamay Waqooyiga dalka Suuriya,ka dib banaan bax looga soo horjeedo Maraykanka oo ka dhacay Gobolkaasi.
Dagaalkaasi oo ka dhacay Tuulladda lagu magacaabo Khirbet Ammo oo u dhow Xuduudka Degmadda Qamishli ayaa la sheegay in lagu dilay Wiil 14-jir ah, halka Oday kalena lagu dhaawacay.
Milliteriga Maraykanka ayaa la sheegay in ay rasaas fureen, kadib, markii ay Dadka Deegaanka isku dayeen in ay ka dibad-baxaan Kolonyo Gaadiidka Ciiddankaasi oo doonaya inay gudaha u galaan Deegaan ay Dowwladda Syria maamusho.
Dhacdo Saxafi la socda Milliteriga Syria ayaa waxa uu Muuqaal Video ah ka qabtay Diyaarad Dagaal oo ay Maraykanka leeyihiin oo duqeyn ka geysatay Fariisimo ay Ciiddanka Dowladda Syria ku leeyihiin gudaha Degmadda Qamishli.
Muuqaalka Video-ga waxaa ka muuqday Diyaarad nooceedu ahaa F 15 Jet oo ay Ciiddanka Cirka Maraykanka leeyihiin oo dul martay Deegaanka ay Ciiddanka Maraykanka iyo dadka Deegaanka ku dagaalameen.
Isbahaysiga Maraykanka weli war kama soosaarin Muquaalka Diyaaradda duqeynta geysatay, balse, Afhayeen u hadlay Milliteriga Maraykanka oo lagu magacaabo Mayles Kajins waxa uu sheegay inay Isbahaysiga rasaas ku fureen dadka Rayidka, si ay isku difaacaan.
Ciidamo Itoobiya iyo maleeshiyada Macawiisley oo ku dagaalamay Hiiraan